Compact အောက်ဆီဂျင် Generator ကို China Manufacturers & Suppliers & Factory
Compact အောက်ဆီဂျင် Generator ကို - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Compact အောက်ဆီဂျင် Generator ကို ထုတ်ကုန်များ)
ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပစ္စည်း PSA Compact အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပစ္စည်း PSA Compact အောက်ဆီဂျင် Generator ကို ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပစ္စည်း PSA Compact အောက်ဆီဂျင် Generator ကိုဖော်ပြချက်: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ETR...
ဆေးရုံကုတင်ဌာနမှူးအိပ်ယာခေါင်း Panel ကို
ထုပ်ပိုး: ထုပ်ပိုးခြင်း - ပလတ်စတစ်အိတ်အတွင်း၊ အမြှုပ်အလယ်၊ သစ်သားသေတ္တာနှင့်အတူ။
Supply နိုင်ခြင်း: 2000 pcs per month
China Factory မှဆေးရုံကုတင်မှူးယူနစ် ETR ဆေးရုံကုတင်မှူးယူနစ်ဖော်ပြချက် ဆေးရုံကုတင်ခေါင်းကိုယူနစ်ကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်ကို acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာသုံး built-in သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ခိုင်မာတဲ့လျှပ်စစ်နှင့်အားနည်းလျှပ်စစ်လိုင်းများ cabling ကို...
ce နှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compacted အောက်စီဂျင်မီးစက်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ပစ္စည်းရောင်းချသောအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA compacted အောက်စီဂျင်မီးစက် compressed ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compacted အောက်စီဂျင်အောင်စက်
PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကို App ကိုစောင့်ကြည့်
PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကို App ကိုစောင့်ကြည့် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA compacted အောက်စီဂျင်မီးစက် compressed ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင်အတွက် PSA အောက်စီဂျင်မီးစက်
ISO နှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compacted အောက်စီဂျင်စက်ရုံအသစ် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA compacted အောက်စီဂျင်မီးစက် compressed ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
Professional က Compact ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compressed လေကြောင်းစနစ်
ထုပ်ပိုး: သစ်သားသေတ္တာ, ပို့ကုန်စံထုပ်ပိုး
Supply နိုင်ခြင်း: 1000 pcs per month
Professional က Compact ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compressed လေကြောင်းစနစ် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ၁။ ဖော်ပြချက် compressed air ကို air compressor မှထုတ်လုပ်ပြီး gasco tank ထဲသို့ aftercooler မှတဆင့် ၀ င်သည်။ ထို့နောက် filter group နှင့် adsorption dryer မှတဆင့် compressed air အတွင်းရှိအညစ်အကြေး၊...
Compact Air ကို Generator ကို
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compressed လေကြောင်းစနစ် Compressed Air Generator ကို ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ၁။ ဖော်ပြချက် compressed air ကို air compressor မှထုတ်လုပ်ပြီး gasco tank ထဲသို့ aftercooler မှတဆင့် ၀ င်သည်။ ထို့နောက် filter group နှင့် adsorption dryer မှတဆင့် compressed air အတွင်းရှိအညစ်အကြေး၊...
သေးငယ်တဲ့ Compact အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ
Supply နိုင်ခြင်း: 1000sets/Year
ရေနံချောဆီကိုအမျိုးအစားအနုတ်လက္ခဏာဖိအားစုတ်ယူခြင်းဘူတာ ၁။ ETR ဆီချောဆီဆေးအမျိုးအစားဆေးရုံဖုန်စုပ်စက်၏ဖော်ပြချက် ETR သည်ရေနံချောဆီကိုလေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ခု၊ လေဟာနယ် solenoid အဆို့ရှင်၊ ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော၊...
ရေနံချောဆီကိုအမျိုးအစားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုလေဟာနယ်စနစ် ၁။ ETR ဆီချောဆီဆေးအမျိုးအစားဆေးရုံဖုန်စုပ်စက်၏ဖော်ပြချက် ETR သည်ရေနံချောဆီကိုလေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ခု၊ လေဟာနယ် solenoid အဆို့ရှင်၊ ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော၊...
Supply နိုင်ခြင်း: 200 sets per month
ရေနံချောဆီကိုလေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းစုပ်စက်စနစ် လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းစနစ်၏ 1. ဖော်ပြချက် ETR သည်ရေနံချောဆီကိုလေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ခု၊ လေဟာနယ် solenoid အဆို့ရှင်၊ ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော၊...
ဆေးရုံရေနံချောဆီကိုဖုန်စုပ်စက် လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းစနစ်၏ 1. ဖော်ပြချက် ETR သည်ရေနံချောဆီကိုလေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ခု၊ လေဟာနယ် solenoid အဆို့ရှင်၊ ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလေဟာနယ်စုပ်စက်ယူနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော၊...
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compressed air system ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်
၁။ ဖော်ပြချက် compressed air သည် air compressor မှထုတ်လုပ်ပြီး gasco tank ထဲသို့ aftercooler မှတဆင့် ၀ င်သည်။ ထို့နောက် filter group နှင့် adsorption dryer မှတဆင့် compressed air အတွင်းရှိအညစ်အကြေး၊ ရေငွေ့နှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဖိအားလျော့ချပေးသည်။ compressed air ducts များကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သော...
ရပ်ကွက် Calling ပစ္စည်းကိရိယာကိုဆေးရုံအတွက်သုံးသည်
ထုပ်ပိုး: ထုပ်ပိုးခြင်း - ပလတ်စတစ်အိတ်အတွင်း၊ အမြှုပ်အလယ်၊ ပုံးနှင့်အတူ
Supply နိုင်ခြင်း: 2000 sets per month
ရပ်ကွက် Calling ပစ္စည်းကိရိယာကိုဆေးရုံအတွက်သုံးသည် ရပ်ကွက် Calling ပစ္စည်းကိရိယာကိုဆေးရုံအတွက်သုံးသည် ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်...
ဆေးရုံအသေးစားအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compacted အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်
ဆေးရုံအသေးစားအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compacted အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA Compact အောက်စီဂျင်မီးစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ
အသေးစား Compact PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA Compact အောက်စီဂျင်မီးစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
ISO နှင့်အတူ Compact Oksigen ပြုလုပ်ခြင်းစက်
ISO နှင့်အတူ Compact Oksigen ပြုလုပ်ခြင်းစက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA Compact အောက်စီဂျင်မီးစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
ISO နှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compacted အောက်စီဂျင်စက်ရုံအသစ်
ISO နှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compacted အောက်စီဂျင်စက်ရုံအသစ် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA Compact အောက်စီဂျင်မီးစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compacted အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့အောင်စက်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ compacted အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့အောင်စက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးဘက် PSA Compact အောက်စီဂျင်မီးစက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက်≥90% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk အရည်အောက်စီဂျင်နှင့်ဆလင်ဒါအောက်စီဂျင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ETR ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA...
ရပ်ကွက်က Wall တပ်ဆင်ထား Bed Head Panel ကို
ထုပ်ပိုး: ထုပ်ပိုးခြင်း - အတွင်းရှိပလတ်စတစ်အိတ်၊ အမြှုပ်အလယ်၊ သစ်သားသေတ္တာနှင့်အတူ။
ရပ်ကွက်က Wall တပ်ဆင်ထား Bed Head Panel ကို ETR ဆေးရုံကုတင်မှူးယူနစ်ဖော်ပြချက် ဆေးရုံကုတင်ခေါင်းကိုယူနစ်ကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်ကို acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် dismountable panel၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက်ပါ ၀ င်သည့် cabling လိုင်းသုံးခု၊...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုတင်ခေါင်း Panel ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုတင်ခေါင်းယူနစ်ဆွဲပြားကုလားထိုင် ဦး စီးဌာန ETR ဆေးရုံကုတင်မှူးယူနစ်ဖော်ပြချက် ဆေးရုံကုတင်ခေါင်းကိုယူနစ်ကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်ကို acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် dismountable panel၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက်ပါ ၀ င်သည့် cabling...
အောက်စီဂျင်စက်ရုံစက်ရုံထောက်ပံ့ရေးအောက်စီဂျင် Generator ကို
အောက်စီဂျင်စက်ရုံစက်ရုံထောက်ပံ့ရေးအောက်စီဂျင် Generator ကို အောက်စီဂျင်စက်ရုံစက်ရုံထောက်ပံ့ရေးအောက်စီဂျင် Generator ကို ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ PSA အခြေခံမူများအရ ETR PSA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်စက်သည်လေမှတိုက်ရိုက် ၉၃% - ၃% သန့်စင်သောအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ Bulk...
ဆေးရုံအဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
Compact အောက်ဆီဂျင် Generating စက်
အောက်စီဂျင် Psa Generator ကို
အသစ် Compacted အောက်စီဂျင် Generator ကို
Containerized PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
Compact အောက်ဆီဂျင် Generator ကို Psa အောက်ဆီဂျင် Generator ကို PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကို removable အောက်ဆီဂျင် Generator ကို Compact အောက်ဆီဂျင် Generating စက် အောက်စီဂျင် Psa Generator ကို အသစ် Compacted အောက်စီဂျင် Generator ကို Containerized PSA အောက်ဆီဂျင် Generator ကို